Apple inoonga mamiriro ezvinhu apo kambani inobhadhara mutero munyika umo inotengesa | Ndinobva mac
Apple inokoshesa mamiriro apo kambani inobhadhara mutero munyika umo inotengesa
Iyo ndeimwe yemakakatanwa mapoinzi, kwete Apple chete, asi emakambani ese ehunyanzvi ane kukosha kwakakosha pasirese. Makambani aya anoisa mahofisi avo emitero munyika yeEuropean Union uko kubhadhara kwemitero yekutengesa zvigadzirwa kwakaderera. Naizvozvo, kunyangwe tikatenga Mac kuSpain, Apple ichabhadhara yakawanda yemitero, mune ino kesi kuIreland, uko kambani inochengetedza mutero wayo wezvekuEurope. Mitongo yakasiyanasiyana iri kumanikidza makambani aya kuti apinde muchikamu chavanochengetedza nekubhadhara mutero munyika idzi.
Tim Cook naEmmanuel Macron vakasangana svondo rapfuura muFrance, vachitora mukana wekushanya kwaCook kune akasiyana Apple vatengesi. Macron akaudza Cook kuti Apple inofanira kubhadhara mutero munyika umo inotengesa zvigadzirwa zvayo.
Hofisi yaMacron yakati vaviri ava havangataure pamakakare emitero apfuura, asi Cook akabvuma kuti mitemo yemitero pasi rose iri kuchinja kuitira kuti makambani abhadhare mutero panogadzirwa mari
Zvinonzi Apple inobhadhara muIreland chete 2.5% yemubatsiro unowanikwa kubva mukutengesa. Iyo faindi yakatemwa neEU paApple inosvika pamamirioni gumi nematatu emadhora. Muna 13, Italy yakamhan'arira kambani yemapuro, iyo yakanzi ibhadhare mamirioni 2015 emitero.
Kune izvi kana dzimwe mhirizhonga dzakavhurika, Apple yaizokoshesa kushandura zano rayo uye ichiteerera kumitero munyika yekutengesa zvigadzirwa zvayo. Chimwe chinhu ndechekuti inotaurirana neakasiyana manejimendi, imwe chaiyo kurapwa kunoenderana nemari dzekudyara dzainoita.
Izvi hazvireve kuti Apple inoramba zvido zvayo zvazvino maererano nechinodiwa neEU, kuitira kuti kambani igadzirise mutero wayo unobhadharwa chete muIreland, nehutano hwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inokoshesa mamiriro apo kambani inobhadhara mutero munyika umo inotengesa
Apple inomutsa Steven Spielberg's "Anoshamisa Tales" akateedzana
Natsiridza Mac yako nepakeji rezvikumbiro uye chengetedza mazana emauro